Изговорите реч (мјанмарски).
Сними изговор за „thiha“ thiha
Сними изговор за „ဆင်းရဲသော“ ဆင်းရဲသော
Сними изговор за „ရုပ်ဆိုးသော“ ရုပ်ဆိုးသော
Сними изговор за „လျင်မြန်သော“ လျင်မြန်သော
Сними изговор за „ပျော်ရွှင်သော“ ပျော်ရွှင်သော
Сними изговор за „လွယ်ကူသော“ လွယ်ကူသော
Сними изговор за „ချမ်းသာသော“ ချမ်းသာသော
Сними изговор за „ဝမ်းနည်းသော“ ဝမ်းနည်းသော
Сними изговор за „သန်မာသော“ သန်မာသော
Сними изговор за „အားနည်းသော“ အားနည်းသော
Сними изговор за „တက္ကသိုလ်“ တက္ကသိုလ်
Сними изговор за „အလွန်“ အလွန်
Сними изговор за „အသက်“ အသက်
Сними изговор за „ပိုင်“ ပိုင်
Сними изговор за „မင်းကိုချစ်တယ်“ မင်းကိုချစ်တယ်
Сними изговор за „နွားထိုးကြီး“ နွားထိုးကြီး [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „ကြည့်မြင်တိုင်“ ကြည့်မြင်တိုင် [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „တွံတေး“ တွံတေး [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „ဗန်းမော်“ ဗန်းမော် [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „ဆွမ်ပရာဘွမ်“ ဆွမ်ပရာဘွမ် [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „ပူတာအို“ ပူတာအို [Cities in Myanmar]
Сними изговор за „yei“ yei
Сними изговор за „leech ei’“ leech ei’
Сними изговор за „သ“ သ
Сними изговор за „နေကောင်းရဲ့လား“ နေကောင်းရဲ့လား
Сними изговор за „French“ French [speech, language, adjective, noun, français, Italien, french in burmese speech]
Сними изговор за „Thetwei Lynn“ Thetwei Lynn [Thetwei, Lynn]
Сними изговор за „Kalaw“ Kalaw [città]
Сними изговор за „Pindaya“ Pindaya [città]
Сними изговор за „မြစ်ကြီးနားမြို့“ မြစ်ကြီးနားမြို့
Сними изговор за „Kalewa“ Kalewa
Сними изговор за „why“ why [question, adverbs, noun, conjunction, conjunctions, interjection, Did you go?]
Сними изговор за „Kyaukphyu“ Kyaukphyu
Сними изговор за „ငပလီကမ်းခြေ“ ငပလီကမ်းခြေ
Сними изговор за „ငပလီ“ ငပလီ
Сними изговор за „၉၆၉“ ၉၆၉ 
Сними изговор за „လှုပ်ရှားမှု“ လှုပ်ရှားမှု [activity, movement]
Сними изговор за „၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု“ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှု [969 Movement]
Сними изговор за „အစြန္းေရာက္ဝါဒီ“ အစြန္းေရာက္ဝါဒီ [extremist]
Сними изговор за „မုန့်ဖတ်“ မုန့်ဖတ်
Сними изговор за „တောင်ပြိုလက်ဝဲ“ တောင်ပြိုလက်ဝဲ [Taungpyoletwei -- I think so]
Сними изговор за „<span title="">ဒီမှာ</span>“ <span title="">ဒီမှာ</span>
Сними изговор за „မြေခွေး“ မြေခွေး
Сними изговор за „ကျပ်“ ကျပ်
Сними изговор за „aw“ aw [sound effect, Scrabble words, after work, party, colleagues, job, alkohol, hey red do we q caffxfdfffzzzsdrrrne]
Сними изговор за „လူထုံ“ လူထုံ
Сними изговор за „ရုံမိနစ်“ ရုံမိနစ်
Сними изговор за „လက်ဝှေ့“ လက်ဝှေ့ [sports]
Сними изговор за „မိတျဆှေ“ မိတျဆှေ
Сними изговор за „ရဣပဥ မအရမအ“ ရဣပဥ မအရမအ
Сними изговор за „ေခြး“ေခြး [Other]
Сними изговор за „myayyar“myayyar [Everyday Phrases]
Сними изговор за „ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်“ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် [Everyday Phrases]
Сними изговор за „Пошли работать“Пошли работать [Other]